DEG .. DEG Wadamada Kenya iyo Ivory Coast oo lagu arkay caabuqa Coronavirus - Bandhiga Media
Arday u dhashay dalka Kenya oo ka soo degay gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ee (JKIA) oo leh astaamo la mid ah caabuqa lala xiriirinaya neefsashada ee coronavirus oo saameynta ballaaran ku yeeshay wadanka Shiinaha ayaa loo la cararay isbitaalka caalamiga ee jomo kenyaata si baritaan lagu sameeyo.
Waxaa haatan ardeyga lagu karantiilay isbitaalka qaran ee Kenyatta ee magaalada Nairobi.
Ardayga oo aan magaciisa la shaacin oo kujira da’da 20 ayaa ku soo safray shirkadda diyaaradaha ee Kenya airways taas oo kusoo degtay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta abaaro 9.30 subaxnimo, waxaana isla markiibi loo la cararay isbitaalka Kenyatta.
Shirkadda diyaaradaha ee Kenya airways ayaa xaqiijisay in ardaygu ka soo raacay diyaarada magaalada Guangzhou una soo socday magaaladda Nairobi.
Aradayga ayaa asal ahaan ka soo jeeda magaalada xudunta uu ah caabuqaan galaaftay dalweynaha shiinaha ee Wuhan.
STUDENT FROM China with coronavirus-like symptoms admitted to KNH isolation ward, hospital’s Communication Manager Hezekiel Gikambi says. pic.twitter.com/Kn29x2DXro
— NationBreakingNews (@NationBreaking) January 28, 2020
Madaxa isgaarsiinta ee isbtibaalka Kenyaata Hezekiel Gikambi ayaa sheegay in hada baritaan uu maraya ardayga si mesha looga saaro ama loo xaqiijiyo in uu qaba cudurka.
Waa qofkii ugu horreeyay ee looga shakiyay caabuqan oo lagu arko gudaha dalka Kenya.
In ka badan 2,700 ayuu cudurkani galaftay waxaana ila iyo hada xaqiijiyay dhimashada 106 qof.
Dhanka kale, dalka Ivory Coast, ayaa laga soo warinayaa in mas’uuliyiinta caafimaadka dalkaasi ay baarayaan gabadh ardayad ah oo ka timid dalka Shiinaha, taas oo looga shakisan yahay in ay qabto caabuqa Coronovirus oo galaafsaday boqolaal ruux, sida uu baahiyay telefishinka CNN.
Ivory Coast is investigating a suspected case of Wuhan coronavirus in a female student that arrived from China, according to the country's health authorities. https://t.co/iPMbB9peXP
— CNN Africa (@CNNAfrica) January 27, 2020
gabdhanArdayga, oo aysan masuuliyiintu sheegin magaceeda, ayaa ah qofkii ugu horeeyay ee lagu arko caabuqa Coronavirus, gudaha dalka Ivory Coast.
Gabadhaan oo da’deeda lagu sheegay 34 sano, ayaa Sabtidii kasoo dhooftay garoonka caalamiga ah ee Félix-Houphouët-Boigny ee Abidjan magalada Beijing, markii uu kasoo degay garoonka iyo ayuu qufac iyo hindhiso fara badan la kulmay, waxaana la sheegay in ay ku adkaatay, sida telefishinka CNN uu kasoo xigtay bayaan kasoo baxay wasaarada caafimaadka ee Ivory Coast.
Michel Yao, oo ah maamulaha barnaamijka gurmadka deg degga ah ee WHO Africa, ayaa sheegay in hay’addu kula talisay wasiirrada caafimaadka ee gobolka in ay ku dadaalaan baaritaanka caadiga ah ee hargabka, taas oo loogu talagalay rakaabka ka imanaya dhul weynaha Shiinaha.
Dadka deegaanka, ayaa waxaa lagu boorinayaa inaysan argagaxin, oo waliba la imadaan nadaafad sax ah, oo ay booqdaan xarunta caafimaadka ee ugu dhow haddii ay dareemaan qandho, qufac, ama dhibaatooyin dhanka neefsashada ah.
In kabadan 2,700 oo kiis oo cudurka coronavirus ah ayaa la xaqiijiyay, taasoo dhalisay dalal adduunka ah, oo ay kujirto Nigeria inay korjoogto ilaalo iyo baarista madaarada, gaar ahaan dadka safarka ah ee ka yimid Wuhan ee Shiinaha halkaasoo dillaacay cudurka Diisambar.
Somalia: Drought Final Report, DREF n° MDRSO007 – Somalia – ReliefWeb